सभामुख महरा नेतृत्वको भ्रमण टोलीले के गर्दैछ चीनमा ? – Pahilo Page
सभामुख महरा नेतृत्वको भ्रमण टोलीले के गर्दैछ चीनमा ?
२३ भाद्र २०७५, शनिबार ०९:५० 479 पटक हेरिएको
ल्हासा, २३ भदौ । चीन भ्रमणमा रहेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले आज (शनिबार) बिहान तिब्बतस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । दूतावासमा सभामुख महरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूत गोविन्द कार्कीले स्वागत गरेका थिए ।
सो अवसरमा सभामुख महराले नेपाल र तिब्बतबीच व्यापार बढाउन महावाणिज्य दूतावासको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर भएर लाग्न आग्रह गरे । उनले नेपालसँग सीमा जोडिएको चीन (तिब्बत)बाट व्यापारिक रुपमा धेरै फाइदा लिन सकिने बताए ।
भेटमा महावाणिज्य दूत गोविन्द कार्कीले महावाणिज्य दूतावासको अवस्था, नेपाल तिब्बत व्यापारको गति र सम्भावनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । सभामुख महराले भोलि नै ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास भवनको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।